Mutungamiri mutsva VaEmmerson Mnangagwa vari kupa mwedzi mitatu vanhu vakaburitsa upfumi kuti vadzose vasingasungwi
Mutungamiri wenyika mutsva, Vaemmerson Mnangagwa, vanoti sedanho rekutanga rekuti mari neupfumi zvakabuditswa munyika zviri kunze kwemutemo zvidzoke, hurumende yavo icharegerera vakaburitsa mari ava kana vachinge vaidzora munyika mukati memwedzi mitatu.
Mugwaro ravaburitsa neChipiri, VaMnangagwa vati vari kupa vanhu ava mwedzi mitatu yekuti vadzose mari nepfuma zvakaburitswa munyika zvisiri pamutemu uye hurumende yavo ichange sina mibvunzo yainobvunza kana mhosva yainopomera vanhu ava vanenge vazvipira kubuda pachena.
Vanoti chirongwa che “Operation Restore Legacy” chakabatsira kufumura kuti mari dzakawanda kwazvo pamwe nemimwe midziyo zvakaburitswa kunze kwenyika nevanhuwo zvavo pamwe nemamwe makambani.
Vanoti zviitiko zvakadai zvinoumba mhosva yezveupfumi yakaomarara kuvana veZimbabwe iyo hurumende isingakwanisi kuregerera.
VaMnangagwa vanoti nguva yekuregerera vanhu nemakambani aya inotanga kubva musi wa 1 Zvita 2017 kusvika mukupera kwaKukadzi wegore rinouya.
Kana mwedzi mitatu iyi yapuura, hurumende inoenderera mberi nekusunga vose vanenge vasina kuteerera kurudziro iyi, nekudaro vose vane chekuita nenyaya iyi vari kukurudzirwa kuti vatirimuke kuitira kuti vasatorerwe matanho nevemitemo.
Nyanzvi mune zveupfumi, uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, VaLuxon Zembe, vanoti danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri rakanaka chose sezvo mari idzi dzichizoshandiswa munyika.